ဒူဒူကြီး: Hydraulic fluids
ဟိုတလောက သဘေ်ာလွဲပြောင်းလက်ခံယူခြင်း delivery အလုပ်ကိစ္စတခုနဲ့ ပက်သက်ပြီး၊ အနှတ် (၁၀) ဒီဂရီအောက်အေးတဲ့ နေရာတခုကို၊ ခဏရောက်နေခဲ့ပါတယ်။ သဘေ်ာအတွက် လမ်းခရီးမှာ လိုအပ်မယ့် ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီတွေ၊ မှာတဲ့အခါ ပေးလိုက်တဲ့ HV 68 ဆိုတဲ့ specification အတိုင်းမဟုတ်ပဲ LV 46 ဆိုတဲ့ specification ဖြင့် supplier မှပေးပို့လာ ပါတယ်။ supplier မှ အအေးပိုင်းဒေသမှာ သုံးမယ် အထင်နဲ့ specification မှားတယ် ဆိုပြီး၊ စေတနာဖြင့် သင့်လျှော်တဲ့ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီတွေကို၊ ပေးပို့ခဲ့ပေမယ့် သဘေ်ာဟာ၊ အပူပိုင်းဇုံ tropical area ကိုသွားမှာမို့ HV 68 နဲ့ပြန်လဲပေးရန်သာ supplier ကို အကြောင်းပြန်ရပါတယ်။
သဘေ်ာသား ဘဝတုန်းက crane တွေ၊ winch တွေနဲ့ steering gear တွေနဲ့ပက်သက်ပြီး၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီတွေနဲ့ ရင်းနှီးခဲ့ရပါတယ်။ မှတ်မှတ်ရရ ဂျာမဏီဆောက်၊ 'တခိုင်လုံးရွှေ' ဆိုတဲ့ တစီးလုံးမြန်မာ သဘေ်ာတစီးမှာ junior တဦးအဖြစ် စီးရစဉ်၊ 32, 46 နဲ့ 68 ဆိုပြီး၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီတွေ ခွဲသုံးထားတာကို သတိရမိပါတယ်။ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲ 'မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်' မှာ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ အကြောင်း မေးထားတာတွေ့လို့၊ ရေးလက်စ post ကို ခဏရပ်ကာ၊ မှတ်သားမိသလောက် ဟိုက်ဒရောလစ် ဆီအကြောင်း၊ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီ hydraulic oil ရယ်လို့၊ အရပ်ခေါါ ခေါါကြတဲ့ hydraulic fluid ကို hydraulic liquid လို့လဲခေါါကြပါတယ်။ hydraulic machinery တွေရဲ့စွမ်းအားလွဲပြောင်းမှု power transfer အတွက်ကြားခံ medium အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ hydraulic fluid ကို ယေဘုယျအနေနဲ့ သဘာဝတွင်းထွက်ဆီ mineral oil တွေမှထုတ်ယူနိုင်သလို water ဆိုတဲ့ရေမှ တဆင့်လည်း ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
hydraulic fluid ထုတ်ယူရာမှာ အသုံးပြုမယ့် mineral oil ဟာ၊ non-vegetable oil ဆိုတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်မှ ထုတ်ယူထားတဲ့ ဆီအမျိုးအစား မဟုတ်ပဲ၊ hydrocarbons compounds ဖြစ်တဲ့ ရေနံ petroleum တနည်းအားဖြင့် ရေနံစိမ်း crude oil မှတဆင့် distillate အနေနဲ့ပေါင်းခံကာ၊ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဆီဖြစ်ပါတယ်။ alkanes အနည်းငယ်ဟာ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီမှာ light mixtures အဖြစ်ရောနှော ပါဝင်နေပြီး၊ အရောင်အဆင်းမဲ့ကာ၊ အနံ့အသက်မရှိတဲ့ colorless and odorless oil ဆီအမျိုးအစားလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ hydraulic fluid တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု functions တွေနဲ့ ရုပ်ဂုဏ်သတ္ထိ property တွေကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါဦးမယ်။
hydraulic system တခုကို၊ ထိရောက်စွာ most efficiently အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်စေရန်၊ အသုံးပြုမယ့် hydraulic fluid ဟာ low compressibility အဖြစ် စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
thermodynamics နဲ့ fluid mechanics ဘာသာရပ်မှာ အရည် fluid သို့မဟုတ် အစိုင်အခဲ solid တခုဟာ၊ ဖိအား pressure သို့မဟုတ် တွန်းအား stress တခုခုပြောင်းလဲမှုကြောင့် ပေါါပေါက်လာမယ့် ထုထည် volume ပြောင်းလဲမှုကို တိုင်းတာခြင်းအား compressibility အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ low compressibility ဆိုတာကတော့ ဖိအား pressure သို့မဟုတ် တွန်းအား stress တခုခုပြောင်းလဲပေမယ့် ထုထည် volume ပြောင်းလဲမှု အနည်းငယ်သာပေါါပေါက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Functions and properties of hydraulic fluids - hydraulic fluid တွေရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု functions တွေကို medium for power transfer and control, medium for heat transfer, sealing medium, lubricant, pump efficiency, special function, environmental impact နဲ့ functioning life ဆိုပြီး၊ တွေ့ရပါတယ်။ hydraulic fluid တွေဟာ hydraulic machinery တွေရဲ့စွမ်းအားလွဲပြောင်းမှု power transfer အတွက်ကြားခံ medium အဖြစ်၊ medium for power transfer and control အနေနဲ့ စွမ်းဆောင်ပေးရာမှာ၊ ဖိသိပ်မှုခံနိုင်ခြင်း low compressibility (high bulk modulus), ရောနှော ပါဝင်နေတဲ့လေကို အလျှင်အမြန်ဖယ်ထုတ်နိုင်ခြင်း fast air release, hydraulic system အတွင်း အမြှုတ်အနေနဲ့နေရာယူမှု နည်းပါးခြင်း low foaming tendency နဲ့ low volatility ဆိုတဲ့ ရုပ်ဂုဏ်သတ္ထိတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အပူကူးပြောင်းမှု medium for heat transfer အနေနဲ့ စွမ်းဆောင်ရာမှာ အပူဒဏ်ခံနိုင်ပြီးအပူကူးမှုလွယ်ကူခြင်း good thermal capacity and conductivity ဆိုတဲ့ရုပ်ဂုဏ်သတ္ထိတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
ယိုစိမ့်မှုမဖြစ်ပေါါစေမယ့်ကြားခံအတားအဆီး sealing medium အနေနဲ့ကတော့ အသုံးပြုတဲ့ hydraulic fluid ရဲ့ shear stability နဲ့ လုံလောက်တဲ့ စေးပျစ်မှု adequate viscosity တနည်းအားဖြင့် viscosity index ဆိုတဲ့ စေးပျစ်မှုအညွန်းကိန်း ရုပ်ဂုဏ်သတ္ထိတွေအပေါါ မူတည်ပါတယ်။ liquid ဆိုတဲ့ အရည်တခုဟာ အပူချိန် temperature မြင့်တက် လာတဲ့ အခါ၊ စေးပျစ်မှု viscosity ကျဆင်းသွားပါတယ်။ ဆီတွေရဲ့ စေးပျစ်မှု viscosity ကို centistokes လို့ခေါါတဲ့ cSt unit ဖြင့် တိုင်းတာသတ်မှတ်ပြီး၊ စေးပျစ်မှု အညွန်းကိန်း viscosity index ကိုတော့ VI scale ဖြင့်ဖော်ပြပါတယ်။
VI scale ကို SAE လို့ခေါါတဲ့ Society of Automotive Engineers အဖွဲ့အစည်းမှ ချောဆီ lubricating oil တွေအတွက်၊ စတင် သတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ အပူချိန် temperatures ကို reference အနေနဲ့ ကိုးကားဖော်ပြပါတယ်။ မူလစတင်သတ်မှတ်စဉ်က VI scale ဟာ '0' မှ '100' အထိသာရှိခဲ့ပါတယ်။ organic compound ဖြစ်တဲ့ naphthalene ဟာ VI scale အရ '0' သာရှိပြီး၊ saturated hydrocarbons တွေနဲ့  ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ paraffin လို့ခေါါတဲ့ alkanes ကတော့ VI scale အရ '100' ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။
chemical compounds တွေဖြစ်တဲ့ additive တွေကို ထည့်သွင်းအသုံးပြုရာမှ၊ VI scale မြင့်မားတဲ့ synthetic oil တွေ ထုတ်လုပ်လာနိုင်တဲ့အခါ VI scale '80' မှ '400' ခန့်အထိရှိတဲ့ ချောဆီ lubricating oil တွေပေါါပေါက်လာပါတယ်။ viscosity index အနနဲ့ '0' ~ '35' VI scale ရှိလျှင် low classification oil, '35' ~ '80' VI scale ရှိလျှင် medium classification oil, '80' ~ '110' ရှိလျှင် high classification oil နဲ့ '110' အထက် VI scale ရှိလျှင် very high classification oil ဆိုပြီးသတ်မှတ်ပါတယ်။
hydraulic fluid ဟာ hydraulic machinery တွေရဲ့စွမ်းအားလွဲပြောင်းမှု power transfer အတွက်ကြားခံ medium အဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အပြင်၊ ချောဆီ lubricant အနေနဲ့လည်း ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ချောဆီ lubricant အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ရာမှာ ဆီရဲ့ စေးပျစ်မှုမှကိုထိန်းထားနိုင်ခြင်း viscosity for film maintenance, အပူချိန်နိမ့်ပေမယ့် အရည်အနေနဲ့သာတည်ရှိနေခြင်း low temperature fluidity, အပူနဲ့ oxidation ဆိုတဲ့ အီလက်ထရွန်ဆုံးရှုံးမှု loss of electrons တို့ကြောင့် ဆီအရည်အသွေး အလွယ်တကူပြောင်းလဲမှု မဖြစ်ပေါါနိုင်ခြင်း thermal and oxidative stability, ရေနဲ့ရောသွားပေမယ့် အလွယ်တကူပြောင်းလဲမှုမဖြစ်ပေါါနိုင်ခြင်း hydrolytic stability or water tolerance, အလွယ်တကူ သန့်ရှင်းစစ်ယူနိုင်ခြင်း cleanliness and filterability, ရောနှော ပါဝင်နေတဲ့ရေကို ဖယ်ထုတ်နိုင်ခြင်း demulsibility, ပွန်းစားမှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း anti-wear characteristics နဲ့ ဓါတ်ပြုတိုက်စားမှုကို တားဆီးပေးနိုင်ခြင်း corrosion control ဆိုတဲ့ရုပ်ဂုဏ်သတ္ထိတွေ ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
hydraulic pump ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် pump efficiency ကောင်းစေဖို့၊ ရုပ်ဂုဏ်သတ္ထိ property အနေနဲ့ high viscosity index ဆိုတဲ့ စေးပျစ်မှုအညွန်းကိန်းမြင့်မားရန်လိုအပ်သလို၊ hydraulic machinery တွေရဲ့ အတွင်းအစိတ်အပိုင်းတွေမှာ ဖြစ်ပေါါတတ်တဲ့ internal leakage ယိုစိမ့်မှုကို၊ လျှော့ချနိုင်ရန် မှန်ကန်တဲ့ proper viscosity ဆီအမျိုးအစားကိုလည်း၊ အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
hydraulic fluid ကို mineral oil တွေမှထုတ်ယူထားပေမယ့် ထူးခြားတဲ့ special function အနေနဲ့ မီးမလောင်နိုင်ခြင်း fire resistance, ပွတ်မှုအားကို ပြောင်းလဲပေးနိုင်ခြင်း friction modifications နဲ့ စွမ်းအင်ရှိပြီးသေးငယ်တဲ့ energetic particles အရာဝထ္ထုတွေနဲ့ စွမ်းအင်ရှိတဲ့ energetic waves လှိုင်းတွေ ဖြတ်သန်း သွားလာခြင်းကို၊ တားဆီးပေးနိုင်ခြင်း radiation resistance ဆိုတဲ့ ရုပ်ဂုဏ် သတ္ထိတွေရှိပါတယ်။
hydraulic fluid တွေကို decomposed အနေနဲ့ စွန့်ပြစ်ရာမှာ၊ အဆိပ်အတောက် ဖြစ်ပေါါမှုနည်းပါးခြင်း low toxicity ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို environmental impact အနေနဲ့ ထိခိုက်မှု မဖြစ်ပေါါစေတာ တွေ့ရသလို၊ သတ်တမ်းတိုတဲ့ အဆင့်နိမ့်ဇီဝပြောင်းလဲဖြစ်ပေါါမှု bio-degradation တနည်းအားဖြင့် စွန့်ပြစ်ထားတဲ့ hydraulic fluid တွေနဲ့ ဘက်တီးရီးယားတွေမှတဆင့်၊ ဇီဝဓါတုဆိုင်ရာ ဓါတ်ပြုမှုအသစ်တွေ၊ မဖြစ်ပေါါနိုင်ခြင်း biodegradability ဆိုတဲ့ ရုပ်ဂုဏ်သတ္ထိ ရှိတာကိုလည်း၊ တွေ့ရပါတယ်။ hydraulic fluid သက်တမ်း functioning life ကတော့၊ material compatibility ဆိုတဲ့ အထက်မှဖော်ပြခဲ့တဲ့ အသုံးပြုထားတဲ့ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီရဲ့ ရုပ်ဂုဏ်သတ္ထိဆိုင်ရာ၊ အရည်အသွေးတွေပေါါမှာ မူတည်ပါတယ်။
ရေကို hydraulic fluid အနေနဲ့ရှေးဟောင်း ancient Egypt လူမျိုးတွေလက်ထက်ကတည်းက၊ အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ (၁၉၂၀) ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကစပြီး၊ hydraulic fluid ထုတ်လုပ်ရာ အခြေခံကုန်ကြမ်း base stock အဖြစ်၊ mineral oil ကိုစတင်အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဆူမှတ် boiling point မြင့်မားပြီး၊ ပင်ကိုမူလ inherent lubrication properties ရုပ်ဂုဏ် သတ္ထိတွေရှိတဲ့အတွက်၊ mineral oil base stocks တွေဟာ၊ hydraulic fluid ထုတ်လုပ်ရာ အဓိကအခြေခံကုန်ကြမ်း အဖြစ်၊ ဒီနေ့ အချိန်ကာလအထိ အသုံးဝင်နေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ တိရိစ္ဆာန်အစာသစ်စေ့တွေက ထုတ်ယူရရှိတဲ့ rapeseed လို့ခေါါတဲ့ canola oil လို၊ သဘာဝဆီ natural oils တွေနဲ့ အစားထိုး ထုတ်လုပ်လာခဲ့ပါတယ်။ glycol, esters, organophosphate ester, polyalphaolefin, propylene glycol နဲ့ silicone oils တို့လို၊ base stocks တွေကိုတော့ fire resistance နဲ့ မြင့်မားတဲ့အပူချိန် extreme temperature ကိုခံနိုင်ရည်ရှိမယ့်၊ hydraulic fluid တွေထုတ်လုပ်ရာမှာ အဓိကအခြေခံ ကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံးပြုပါတယ်။
hydraulic fluid မှာ ဓါတုဒြပ်ပေါင်း chemical compounds တွေအမျိုးအစား၊ စုံလင်စွာ ပါဝင်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ oil အပြင်၊ butanol နဲ့ phthalates, adipate ဆိုတဲ့ adipic acid တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ phthalates နဲ့ adipate တို့ဟာ esters တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် tributylphosphate ဆိုတဲ့ phosphate esters တွေနဲ့ silicones, alkylated aromatic hydrocarbons တွေနဲ့ polyisobutenes ကဲ့သို့ polyalphaolefins တွေနဲ့ corrosion inhibitors တွေလည်း၊ ရောနှောပါဝင်နေပါတယ်။
biodegradable hydraulic fluids အကြောင်းကိုလည်း၊ အနည်းငယ်ထည့်သွင်းဖော်ပြပါရစေ။ oil spill ဆိုတဲ့ ဆီယိုဖိတ်မှုမှတဆင့် သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ကိုအထိခိုက်မခံတဲ့ environmentally sensitive applications တွေမှာ အသုံးပြုမယ့်၊ လယ်ယာသုံး farm tractors တွေနဲ့ သောင်တူးစက် marine dredging တွေအတွက်၊ biodegradable hydraulic fluids တွေကို အသုံးပြုကြပါတယ်။ rapeseed လို့ခေါါတဲ့ canola oil လို၊ သဘာဝဆီ natural oils တွေမှတဆင့်၊ ထုတ်ယူရရှိလာတဲ့ biodegradable hydraulic fluids တွေကို၊ ISO 32, ISO 46 နဲ့ ISO 68 ဆိုပြီး၊ specification အရခွဲခြား သတ်မှတ်ပါတယ်။ ASTM standards အရ ASTM-D-6006 - Guide for Assessing Biodegradability of Hydraulic Fluids နဲ့ ASTM-D-6046 - Standard Classification of Hydraulic Fluids for Environmental Impact တို့မှာလည်း၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ကို environmental impact အနေနဲ့ ထိခိုက်မှုမဖြစ်ပေါါစေမယ့်၊ biodegradable hydraulic fluids တွေကို၊ ခွဲခြားသတ်မှတ် ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
Types of hydraulic fluids - hydraulic fluids တွေကို၊ ထုတ်လုပ်ရာအခြေခံကုန်ကြမ်း base stock တွေအပေါါ မူတည်ပြီး၊ petroleum based mineral hydraulic fluid, phosphate ester based synthetic hydraulic fluids, polyol ester based synthetic hydraulic fluids, Water glycol synthetic hydraulic fluids နဲ့ vegetable hydraulic fluid ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
petroleum based mineral hydraulic fluid တွေဟာ ဈေးသက်သာတဲ့အတွက်၊ အသုံးများတဲ့ hydraulic fluids အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး၊ အခြား hydraulic fluids တွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရာမှာ fire resistance, toxicity နဲ့ biodegradability ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေ၊ နိမ့်ပါးတာတွေ့ရပါတယ်။ phosphate ester တွေကို phosphoric acid နဲ့ aromatic alcohols တို့ပေါင်းစပ်ဓါတ်ပြုခြင်း reaction မှတဆင့် ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ phosphate ester based synthetic hydraulic fluids တွေဟာ flash point မြင့်တဲ့အတွက်၊ fire resistance ကောင်းပေမယ့် toxicity ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေ၊ နိမ့်ပါးတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် paints, adhesives , polymers တွေနဲ့ sealant materials တွေကို ထိခိုက်စေတတ်ပါတယ်။
polyol esters based hydraulic fluids တွေကိုတော့ long-chain fatty acids တွေနဲ့ synthesized alcohols တွေပေါင်းစပ်ဓါတ်ပြုခြင်း reaction မှတဆင့် ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ polyol ester based hydraulic fluids တွေဟာ၊ fire resistance ကောင်းသလို၊ lubrication properties ဂုဏ်သတ္ထိမှာလည်း၊ မြင့်မားပါတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို မထိခိုက်မယ့် environmentally friendly fluid ဖြစ်ပေမယ့်၊ ဈေးနှုံးမြင့်မားတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
water glycol based hydraulic fluids မှာ solution ပုံသဏ္ဍန်နဲ့ ရေဟာ 35 ~ 60 % ခန့်အထိ ပါဝင်နေပြီး၊ anti-foam, anti-freeze, rust and corrosion inhibitors တွေနဲ့ anti-wear တို့လို ထပ်ပေါင်းဒြပ်နှော additives တွေလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ water glycol based hydraulic fluids တွေဟာ biodegradable ဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေ မြင့်မားပြီး၊ fire resistance ကောင်းသလို၊ အဆိပ်အတောက် မဖြစ်စေတဲ့ non-toxic fluid လည်းဖြစ်ပါတယ်။ temperature range အနေနဲ့ 32 °F ~ 120 °F (0 °C ~ 49 °C) အတွင်းမှာသာ ရှိပါတယ်။ အပူခံနိုင်မှုနိမ့်ပါးတဲ့အတွက်၊ evaporation အဖြစ် ငွေ့ရည်စုဖွဲ့ကာ၊ hydraulic fluids ရဲ့ ရုပ်ဂုဏ်သတ္ထတွေကို deterioration အနေနဲ့ ကျဆင်းစေနိုင် ပါတယ်။
vegetable hydraulic fluids တွေကိုတော့ canola oil မှတဆင့်ထုတ်လုပ်ပြီး၊ ဓါတုဖွဲ့စည်းပုံ chemical structure ဟာ၊ polyol esters နဲ့ ဆင်တူပါတယ်။ vegetable hydraulic oils တွေဟာ lubrication properties ဆိုင်ရာရုပ်ဂုဏ်သတ္ထိတွေမြင့်မားသလို၊ viscosity index အရလည်း မြင့်မားပါတယ်။ အဆိပ်အတောက်မဖြစ်စေတဲ့ non-toxic fluid ဖြစ်ကာ၊ biodegradability ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေမှာလည်း၊ မြင့်မားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
Viscosity of hydraulic fluids - hydraulic fluids တွေရဲ့ စေးပျစ်မှု viscosity ကို၊ SAE designation နဲ့ ISO designation ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပေမယ့် နှစ်မျိုးစလုံးဟာ၊ viscosity grading system အပေါါမှာ အခြေခံထားပါတယ်။ hydraulic fluids တွေရဲ့ စေးပျစ်မှုကို low viscosity limit နဲ့ upper viscosity value ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
hydraulic fluids တွေရဲ့ အနိမ့်ဆုံးစေးပျစ်မှု low viscosity ဟာ composition ဆိုတဲ့ ရောနှော ဖွဲ့စည်းထားပုံနဲ့ temperature ဆိုတဲ့ အပူချိန်တို့အပေါါ၊ မူတည်ပါတယ်။ fluids တွေရဲ့ low viscosity limit ကို lubrication properties နဲ့ cavitation ဖြစ်ပေါါခြင်းကို တားဆီးနိုင်မှုဆိုတဲ့ cavitation resistance ဖြင့် သတ်မှတ်ပါတယ်။
hydraulic fluid ဟာ system အတွင်းမှ control valve တွေကိုဖြတ်သန်းစီးဆင်းစဉ်၊ ဖြစ်ပေါါတတ်တဲ့ 'cavitation' အကြောင်း၊ အနည်းငယ်ထည့်သွင်းဖော်ပြပါရစေ။ controlling လုပ်စဉ် fluid flow ရဲ့ pressure ဟာကျဆင်းသွားပြီး၊ flow ရဲ့ velocity ကြောင့်၊ valve seat အပြင်ဖက်မှာ fluid ရဲ့ vapour pressure ထက်နိမ့်တဲ့ local pressure တခု ဖြစ်ပေါါလာပါတယ်။ အဲဒီ အခါ၊ fluid မှာ vapour bubbles အနေနဲ့ လေဘူဘောင်းလို၊ အမြှုတ်တွေ 'ထ' ကုန်ပါတယ်။ pressure ပြန်တက်လာတဲ့အခါ၊ vapour bubbles တွေဟာ၊ မြင့်မားတဲ့ pressure နဲ့ အရှိန်ပြင်းစွာ ရုတ်တရက် ကွဲထွက်ပြိုကွဲသွားပါတယ်။ ကွဲထွက်တဲ့ bubbles collapse မှ adjacent အနေနဲ့ အနီးကပ်ဆုံး metal surfaces တွေ ဖြစ်တဲ့ valve trim, valve body နဲ့ downstream pipework တွေ၊ ထိခိုက် ပျက်စီးခြင်းကို "cavitation" လို့ခေါါပါတယ်။ cavitation ကြောင့် porous အဖြစ်အပေါက်တွေ၊ အချိုင့်တွေနဲ့၊ ကြမ်းတမ်းတဲ့ metal surface မျက်နှာပြင် ဖြစ်လာရသလို၊ protective oxide layers ကိုပါ ကွာကျစေတဲ့ အတွက်၊ accelerated corrosion ကို ပေါါပေါက်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် noise နဲ့ vibration တွေပါ ဖြစ်ပေါါလာတာကို၊ တွေ့ရပါတယ်။
upper viscosity value တန်ဖိုးကတော့ pump အထွက်မှာရရှိလာမယ့် fluid ရဲ့ pressure နဲ့ flow တနည်းအားဖြင့် hydraulic fluid ရဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု ability အပေါါ မူတည်ပါတယ်။ ယေဘုယျာနေနဲ့ hydraulic fluid ရဲ့ common viscosity range ဟာ 16 ~ 100 centistokes အတွင်းရှိသလို၊ အသင့်လျှော်ဆုံး optimum viscosity value အနေနဲ့ 16 ~ 36 centistokes ခန့်ရှိသင့်ပါတယ်။
SAE designation အရ၊ hydraulic fluids တွေကို mono-grade hydraulic fluids နဲ့ multi-grade hydraulic fluids ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါတယ်။ mono-grade hydraulic fluids တွေကို 10, 20, 30 နဲ့ 40 အစရှိတဲ့ ဂဏန်းတွေနဲ့ သက်ေတပြုကာ၊ ဖော်ပြထားပြီး၊ particular temperature ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အပူချိန်တခုမှာ ရှိနေမယ့် စေးပျစ်မှု viscosity တန်ဖိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဂဏန်းတန်ဖိုး ကြီးတဲ့အခါ စေးပျစ်မှု viscosity လည်း၊ မြင့်မားသွားပါတယ်။ ဂဏန်းရဲ့ နောက်မှာ “W” မပါပဲ SAE 10, SAE 20 နဲ့ SAE 30 အစရှိသလို၊ ဖော်ပြထားတဲ့ hydraulic fluids တွေဟာလည်း၊ mono-grade hydraulic fluids တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ 212 °F (100 °C) အထိ အပူချိန်မြင့်မားတဲ့ high ambient temperatures တွေမှာ၊ စေးပျစ်မှု viscosity ပြောင်းလဲမှုမရှိပဲ အသုံးပြုနိုင်မယ့် hydraulic fluids တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဂဏန်းရဲ့ နောက်မှာ “W” ပါဝင်ပြီး SAE 10W, SAE 20W နဲ့ SAE 30W အစရှိသလို၊ ဖော်ပြထားတဲ့ hydraulic fluids တွေဟာလည်း၊ mono-grade hydraulic fluids တွေ ဖြစ်ပါတယ်။0°F ( -18 °C) အထိ အပူချိန်နိမ့်တဲ့ low ambient temperatures တွေမှာ၊ စေးပျစ်မှု viscosity ပြောင်းလဲမှုမရှိပဲ အသုံးပြုနိုင်မယ့် hydraulic fluids တွေဖြစ်ပါတယ်။
စေးပျစ်မှု viscosity တန်ဖိုးအား ထိန်းထားနိုင်စေဖို့ polymeric additives တွေကို viscosity index improvers အဖြစ်ထည့်သွင်းရောစပ်ထားတဲ့ hydraulic fluids တွေကို၊ multi-grade hydraulic fluids အဖြစ် သတ်မှတ်ပါတယ်။ SAE 5W30, SAE 10W20 နဲ့ SAE 10W30 အစရှိသလို၊ ဂဏန်းနဲ့ အက္ခရာတွေဖြင့် ရောနှောဖော်ပြထားပြီး၊ ပထမဂဏန်းဟာ cold temperature မှာရှိမယ့် စေးပျစ်မှု viscosity နဲ့ ဒုတိယဂဏန်းဟာ high temperature မှာရှိမယ့် စေးပျစ်မှု viscosity ကို၊ ကိုယ်စားပြု ပါတယ်။ multi-grade hydraulic fluids တွေဟာ အပူချိန်ပြောင်းလဲမှု temperature range အမျိုးမျိုးအတွင်း၊ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ hydraulic fluids တွေဖြစ်ပါတယ်။
ISO designation အရ၊ hydraulic fluids တွေကို viscosity grading ဆိုတဲ့ VG သက်ေတဖြင့်၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါတယ်။ ISO VG 32, ISO VG 46, ISO VG 68, ISO VG 100 နဲ့ ISO VG 150 အစရှိသလို၊ ဖော်ပြထားတဲ့ hydraulic fluids တွေဟာ viscosity grading တန်ဖိုးဖြင့် ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပြီး၊ particular temperature ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အပူချိန် 40 °C (104 °F) မှာ ရှိနေမယ့် စေးပျစ်မှု viscosity grading တန်ဖိုးကို centistokes ဖြင့် တိုင်းတာ သတ်မှတ်ထားခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Choosing the right hydraulic fluid - multigrade engine oil တွေနဲ့ automatic transmission fluid လို oil တွေကို၊ conventional anti-wear hydraulic fluids တွေအဖြစ်၊ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ viscosity ဆိုတဲ့ စေးပျစ်မှုဟာ၊ hydraulic fluids ရွေးချယ်ရာမှာ အရေးတကြီး၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ့် အချက်အလက် specification ဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုမယ့် operating temperature range နဲ့ viscosity ဆိုတဲ့ စေးပျစ်မှုတို့ ကိုက်ညီခြင်းမရှိတဲ့အခါ၊ hydraulic system တခုကို၊ ထိရောက်စွာ most efficiently အနေနဲ့ အသုံးမပြုနိုင်တော့သလို၊ system အတွင်းတတ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့ component တွေရဲ့ သက်တမ်း service life ဟာလည်း၊ တိုတောင်းသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
အသုံးပြုရန် မှန်ကန်တဲ့ correct fluid viscosity grade ကိုရွေးချယ်ရန်၊ အနိမ့်ဆုံး minimum ambient temperature မှာရရှိနိုင်မယ့် fluid ရဲ့ starting viscosity, အမြင့်ဆုံး maximum ambient temperature မှာပေါါပေါက်လာမယ့် fluid ရဲ့ အများဆုံး maximum expected operating temperature နဲ့ system အတွင်း တတ်ဆင်အသုံးပြုထားတဲ့ component တွေ အတွက် အသင့်လျှော်ဆုံး permissible and optimum fluid viscosity range တို့ကို အခြေခံရပါတယ်။
Fig. Typical minimum viscosity values for hydraulic components
အထက်မှာ အမျိုးအမည်ကွဲပြားတဲ့ hydraulic components တွေအတွက်၊ လိုအပ်မယ့် typical minimum permissible and optimum viscosity values တန်ဖိုးတွေကို၊ ဥပမာအဖြစ် ဖော်ပြထားပါတယ်။ အကယ်၍ hydraulic system ကို အေးခဲတဲ့ freezing temperatures အခြေအနေမျိုးနဲ့ ပူနွေးတဲ့ tropical conditions အခြေအနေမျိုးတွေမှာ၊ ပြောင်းလဲအသုံးပြုရမယ်ဆိုလျှင် wide operating temperature range ရှိတဲ့၊ multi-grade hydraulic fluid တွေကိုသာ ရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ fluid viscosity ကို optimum range ဖြစ်တဲ့ 25 ~ 36 cSt အတွင်းထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုလျှင်၊ hydraulic system ကို၊ ထိရောက်စွာ most efficiently အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်စေနိုင် သလို၊ ပေးသွင်းရမယ့် input power ဟာလည်း ကျဆင်းသွားတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် multi-grade hydraulic fluids တွေကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် hydraulic system အတွက် အသုံးပြုရမယ့် power consumption ကိုလျှော့ချနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
multi-grade fluids တွေ အသုံးပြုရာမှာ၊ ထည့်သွင်းထားတဲ့ viscosity index (VI) improvers တွေကြောင့် hydraulic fluid မှာရှိသင့်တဲ့ air separation properties ဂုဏ်သတ္ထိကို၊ negative effect အနေနဲ့ ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ system မှာသေးငယ်တဲ့ reservoir ကိုတတ်ဆင်အသုံးပြုပါက၊ deaeration characteristics လည်းကျဆင်းသွားပြီး၊ fluids ဟာ မြင့်မားတဲ့ high shear rates နဲ့အတူ turbulent flow တွေဖြစ်ပေါါ စီးဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
turbulent flow ကြောင့် အချိန် ကြာလာတာနဲ့အမျှ hydraulic systems အတွင်းရှိ hydraulic fluid မှ viscosity index improvers တွေရဲ့ molecular bonds တွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရပြီး၊ viscosity လည်း ကျဆင်းသွားရပါတယ်။ ဒီ့အတွက် high VI လို့ခေါါတဲ့ multi-grade fluid တွေကို၊ ရွေးချယ် အသုံးပြုတဲ့အခါ VI improver sheardown ကို၊ compensate အနေနဲ့ အစားထိုးနိုင်စေရန်၊ hydraulic component ထုတ်လုပ်သူ manufacturers တွေ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ minimum permissible viscosity values တန်ဖိုးထက် 30 percent ခန့် ပိုမယ့် multi-grade fluid ကိုရွေးချယ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
အပူချိန်ပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပေါါမှု နည်းပါးတဲ့ narrow operating temperature range အတွင်းမှာတော့ viscosity အပြောင်းအလဲနည်းပါးတဲ့အတွက်၊ monograde hydraulic fluids တွေကိုသာ၊ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
Detergent or no detergent - DIN 51524 standard အရ၊ HLP-D fluids ဆိုပြီး anti-wear hydraulic fluids တွေကို ခွဲခြား သတ်မှတ်ထားတာ၊ တွေ့ရပါတယ်။ anti-wear hydraulic fluids တွေထဲမှာ၊ detergents တွေနဲ့ dispersants တွေပါဝင်သလို၊ အသုံးများတဲ့ hydraulic fluids တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ fluid အတွင်း ရေရောနှောပါဝင်နေလျှင်လည်း၊ detergents တွေကြောင့် emulsify အနေနဲ့ ပျစ်နှစ်စေးကပ်သွားစေသလို၊ အခြား contaminants အဖြစ်၊ ရောနှောပါဝင်နေတဲ့ varnish နဲ့ sludge စတဲ့ အနယ်အနှစ်တွေနဲ့အတူ၊ disperse အနေနဲ့ ပြိုကွဲကျေပျက်သွားစေပါတယ်။ emulsify water နဲ့ deposit အဖြစ်၊ အနည်ထိုင်သွားမယ့် ရောနှောပါဝင်နေတဲ့၊ contaminants တွေကို hydraulic system မှာတတ်ဆင်ထားတဲ့ ဆီစစ် oil filters တွေနဲ့ ရေစစ် emulsified water filters တွေမှတဆင့် ဖယ်ထုတ်ယူနိုင်ပါတယ်။
hydraulic system အတွင်းမှရေကြောင့် fluid ရဲ့ lubricity နဲ့ filterability ကိုကျဆင်းစေနိုင်ပြီး၊ seal တွေမှ ယိုစိမ့်မှုတွေဖြစ်ပေါါစေသလို၊ corrosion နဲ့ cavitation တွေလည်းပိုမို ဖြစ်ပေါါစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် hydraulic system အတွင်းမှ ရေဟာ မြင့်မားတဲ့ ဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတဲ့ highly loaded parts အစိတ်အပိုင်းတွေအတွင်း၊ အပူချိန်ကြောင့် steam အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီ့အတွက် detergents တွေနဲ့ dispersants တွေပါဝင်တဲ့ anti-wear hydraulic fluids တွေကို၊ အသုံးပြုပေမယ့် operating temperature ကို oil saturation point အောက်မှာသာ အသုံးပြုပြီး၊ ရေရောနှောပါဝင်နေမှု water content ကို၊ ထိန်းထားသင့်ပါတယ်။
Anti-wear or no anti-wear - lubrication ရဲ့ boundary conditions တွေကို ထိန်းထားနိုင်စေရန်၊ hydraulic fluids တွေမှာ၊ anti-wear additives တွေကို ထည့်သွင်း အသုံးပြုကြပါတယ်။ အသုံးများတဲ့ anti-wear additives ကတော့ ZDDP လို့ခေါါတဲ့ zinc dialkyl dithiophosphate ဖြစ်ပါတယ်။ ZDDP ရဲ့ ဓါတုပြိုကွဲမှု chemically break down ကြောင့် hydraulic system အတွင်းမှ သတ္ထု metals တွေပျက်စီးပြီး၊ fluid ရဲ့ filterability ကို ကျဆင်းစေတတ်ပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့ high-pressure ဖိအားနဲ့ မြင့်မားတဲ့ high-performance စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်၊ piston pump တွေနဲ့ motor တွေကိုအသုံးပြုထားတဲ့၊ hydraulic system တွေမှာ၊ ဓါတုပြိုကွဲမှုမဖြစ်ပေါါနိုင်မယ့် stabilized ZDDP အမျိုးအစား anti-wear additives တွေပါဝင်တဲ့ hydraulic fluids တွေကိုသာ၊ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။
Fig. Effect on viscosity upon the volumetric and mechanical efficiency of hydraulic pumps
gear pump, piston pump, gear roller motor, vane motor, mobile spool valve နဲ့ cartridge spool valve အစရှိသလို hydraulic system ကို operate လုပ်မယ့် အဓိက components အမျိုးအစားအလိုက် မည်သည့် fluid အမျိုးအစားကိုသုံးရမယ်ဆိုပြီး၊ machinery ထုတ်လုပ်သူ makers တွေက၊ သတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အသုံးပြုမယ့် machinery ရဲ့ volumetric efficiency နဲ့ mechanical efficiency တို့အပေါါါမူတည်ပြီး၊ viscosity ကိုသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် hydraulic fluid တွေကိုဝယ်ယူတိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ manufacturer and distributor တွေမှ fluid နဲ့ပက်သက်တဲ့ specification တွေကိုပေးသလို၊ material data sheet လို့ခေါါပါတယ်။ material data sheet ကို MSDS တနည်းးအားဖြင့် material safety data sheet လို့လည်း၊ ခေါါကြပါတယ်။ mineral oil မှထုတ်ယူရရှိတဲ့ hydraulic fluid တွေရဲ့ material data sheet မှာ density, kinematic viscosity, viscosity index, flash point, pour point, aniline point နဲ့ colour တို့နဲ့ပက်သက်တဲ့၊ အချက်အလက် specifications တွေကို ရေးသားဖော်ပြထား ပါတယ်။ biodegradable hydraulic fluid ရဲ့ material data sheet မှာတော့ density, kinematic viscosity, viscosity index, flash point, pour point တို့အပြင်၊ zinc ပါဝင်မှုအချိုးအဆကို ppm ဖြင့်တိုင်းတာဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်။
liquid တခုစီးဆင်းရာ flow မှာဖြစ်ပေါါလာမယ့် internal resistance ကို fluid viscosity လို့ခေါါပါတယ်။ liquid ရဲ့ absolute viscosity ကို " µ " ဆိုတဲ့ သက်ေတဖြင့်သတ်မှတ်ပါတယ်။ absolute viscosity ဟာ fluid ရဲ့ parallel layers (၂) ခုကြားမှာ ပေါါပေါက်လာမယ့် certain slip velocity ဖြစ်ပြီး၊ force အနေနဲ့ ယူဆပါတယ်။ fluid viscosity ကို absolute viscosity နဲ့ kinematic viscosity ဆိုပြီး၊ ခွဲခြားသတ်မှတ် နိုင်သလို၊ absolute viscosity ဟာ liquid တခုစီးဆင်းရာ flow မှာဖြစ်ပေါါလာတဲ့အတွက်၊ dynamic viscosity အဖြစ်ယူဆကြပါတယ်။
Fig. Effect of temperature on kinematic viscosity
kinematic viscosity ကတော့ fluid ရဲ့ dynamic viscosity နဲ့ fluid ရဲ့ density တို့ရဲ့ အချိုးဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် fluid ရဲ့ viscosity ကို dynamic viscosity နဲ့ kinematic viscosity အနေနဲ့ ခွဲခြားတိုင်းတာကြတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ fluid ရဲ့ viscosity ဟာ temperature ကြောင့် အပြောင်းအလဲဖြစ်ပေါါတတ်သလို၊ pressure ကြောင့်လည်း အပြောင်းအလဲ variations တွေ ဖြစ်ပေါါနိုင်ပါတယ်။ close loop hydraulic system တခုမှာ အပူချိန်ဟာ fixed temperature အဖြစ်၊ အပြောင်းအလဲမရှိပေမယ့် system အတွင်းမှ pressure ဟာ 40 MPa သို့မဟုတ် 400 bar ခန့်ရောက်သွားစဉ်၊ viscosity အနေနဲ့ 8 % ခန့်မြင့်တက်သွားတာ တွေ့ရပါတယ်။
Life of hydraulic fluids - ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီရဲ့ အသုံးခံနိုင်မှုသက်တမ်းဟာ၊ quality of oil ဆိုတဲ့ ဆီအရည်အသွေး၊ operating conditions ဆိုတဲ့ အသုံးပြုမှုအခြေအနေတွေနဲ့ potential contamination ဆိုတဲ့ အသုံးပြုနေစဉ်အတွင်း varnish နဲ့ sludge စတဲ့ အနယ်အနှစ်တွေနဲ့အတူ၊ ရေရောနှောပါဝင်နိုင်မှု အစရှိတဲ့ အချက်အလက် factors အကြောင်းအရာတွေပေါါ မူတည်နေပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီဟာ စေးပျစ်မှုအညွှန်းကိန်း viscosity index အပြောင်းအလဲ မရှိပဲ၊ (၆) လခန့်အထိ အသုံးခံပါတယ်။
hydraulic system ကို၊ ထိရောက်စွာ most efficiently အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်စေနိုင်ရန်၊ အသုံးပြုထားတဲ့ hydraulic fluid ကို (၆) လမှာတကြိမ်ခန့် နမူနာ oil sample ယူပြီး၊ oil analysis program အနေနဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ပို့ကာ စစ်ဆေးပေးသင့်ပါတယ်။ စက်မောင်းချိန် running hours အနေနဲ့ 1500 ~ 5000 hours အတွင်း၊ စစ်ဆေးပေးသင့်ပါတယ်။ သဘေ်ာတွေမှာတော့ hydraulic fluid တွေကိုဝယ်ယူတိုင်း၊ ထုတ်လုပ်ရောင်းချသူ manufacturer and distributor တွေမှ oil analysis program အနေနဲ့ အခမဲ့ စစ်ဆေးပေးလေ့ ရှိသလို၊ တခါတရံမှာ မိမိအစီအစဉ်ဖြင့် နှစ်သက်ရာ ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ပို့ကာ၊ စစ်ဆေးလေ့ ရှိပါတယ်။ မိမိ အစီအစဉ်ဖြင့် နှစ်သက်ရာ ဓါတ်ခွဲခန်းသို့ပို့ကာ၊ စစ်ဆေးတဲ့အခါ စစ်ဆေးမယ့် နမူနာ oil sample အပြင်၊ တိကျစွာကိုးကားနိုင်စေရန် အမျိုးအစားတူ၊ မသုံးရသေးတဲ့ ဆီအသစ်ကိုလည်း reference sample အဖြစ်ပေးပို့ သင့်ပါတယ်။
ဟိုက်ဒရောလစ်ဆီရဲ့ ပကတိအသုံးခံနိုင်မှုသက်တမ်း potential life ဟာ၊ အသုံးပြုတဲ့ operating temperature အပူချိန်ပေါါမူတည်နေပါတယ်။ industrial applications အများစုမှာ fluid temperature ဟာ 60 °C ခန့်ရှိပြီး၊ တခါတရံ fluctuations သို့မဟုတ် spikes အနေနဲ့ 85 °C ခန့်သို့ပြောင်းလဲ၊ ရောက်ရှိသွားတတ်ပါတယ်။ 85 °C မှာ extended periods အနေနဲ့ အချိန်ကာလအတော်ကြာကြာ၊ အသုံးပြုခဲ့လျှင် ဆီမှာ oxidation process လည်းလျှင်မြန်စွာ accelerated အခြေအနေဖြင့်၊ ပေါါပေါက်လာပြီး အသုံးခံနိုင်မှု သက်တမ်းဟာ တဝက်ခန့်အထိ တိုတောင်း ကျဆင်းသွားတာ တွေ့ရပါတယ်။ အပူချိန် 10 °C မြင့်တက်လာတိုင်း၊ oxidation rate ဟာ (၂) ဆ တိုးသွားတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။
fluid အတွင်းမှ hydrocarbon molecules တွေဟာ carboxylic acids အဖြစ်၊ converted အနေနဲ့ အသွင်ကူးပြောင်းသွားခြင်းကို 'oxidation' လို့ခေါါပါတယ်။ hydraulic system အတွင်းမှ အသုံးပြုထားတဲ့ certain metals တွေ၊ အစအနအပွန်းအပဲ့ wear particles တွေနဲ့ မြင့်မားတဲ့ high temperature အပူချိန်တို့ ပေါင်းစပ်ရာမှတဆင့် oxidation ဖြစ်ပေါါ လာပါတယ်။
varnish ဟာလည်း oxidation byproducts ဖြစ်သလို၊ အနှယ်အနှစ် sludge အနေနဲ့ servo-valves တွေရဲ့ရွှေ့လျှားမှုအား sticking အဖြစ် အနှောက်အယှက် ပေးတတ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် oxidation byproducts တွေမှ တဆင့် ပေါါပေါက်လာတဲ့ အနှယ်အနှစ် sludge တွေဟာ၊ system အတွင်းမှ filters တွေနဲ့ suction strainers တွေကို clog အနေနဲ့ ပိတ်ဆို့စေတတ်ပါတယ်။ oxidation ဖြစ်ပေါါမှု အနည်းအများပမာဏကို၊ oil analysis program အရ ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်ပြီး၊ အကယ်၍ oxidation rate ပမာဏမြင့်မားနေပါက၊ ဆက်လက်အသုံးမပြုတော့ပဲ ဆီအသစ်ဖြင့် အစားထိုးလဲလှယ်မှု oil renewal ကိုဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်။
hydraulic fluids တွေရဲ့ 99 % ခန့်ကို non-viscosity modified formulations အနေနဲ့ ထုတ်လုပ်ခဲ့ကြပြီး၊ နောက်ပိုင်းမှာတော့ antioxidants တွေရောနှောပေါင်းစပ်ထားတဲ့ oxidation resistance fluid တွေကို၊ ထုတ်လုပ်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။ hydraulic fluids မှ oxidation resistance ကို 'Turbine Oil Oxidation Test ASTM D943' နည်းလမ်းဖြင့် စမ်းသတ်နိုင်ပါတယ်။ ဆီကိုရေဖြင့်ရောစပ်ပြီး metal catalyst တခုနဲ့အတူ၊ အပူပေးကာ၊ hydraulic fluid မှာ ပါဝင်တဲ့ acid number ဟာ 2.0သို့မြင့်တက်သွားမယ့် အချိန်အား တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
system အတွင်းရှိ hydraulic fluid မှာ ရေ water, လေ air, အမှုန်အမွှားအစအနအပွန်းအပဲ့ dirt and wear particles တွေ၊ လောင်စာဆီ fuel oil နဲ့ ချောဆီ lubricating oil အပါအဝင်၊ အခြားသော အမျိုးအစားမတူညီတဲ့ hydraulic fluids တွေဟာလည်း၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် contamination အဖြစ်၊ ရောနှောပါဝင်နေတတ်ပါတယ်။ ရေဟာ hydraulic fluid မှာ contamination အဖြစ်၊ အလွယ်တကူရောနှောပါဝင်လေ့ရှိတဲ့ အရာဖြစ်ပြီး၊ ရေကြောင့် fluid ရဲ့ lubricating property ရုပ်ဂုဏ်သတ္ထိကျဆင်းနိုင်သလို၊ ပွန်းစားမှု wear down တွေအပြင်၊ oxidation rate လည်း တိုးမြင့်လာနိုင်ပါတယ်။ system အတွင်းရှိ hydraulic fluid မှာ လေပါဝင်နေမှုဟာလည်း၊ oxidation rate ကိုတိုးမြင့်လာစေနိုင်ပါတယ်။
အမှုန်အမွှား အစအနအပွန်းအပဲ့ dirt and wear particles တွေဟာ fluid မှာ contamination အဖြစ်ရောနှောပါဝင်ရာမှ၊ oxidation rate ကိုတိုးမြင့်လာစေနိုင်သလို၊ အစိုင်အခဲ solid contaminants အဖြစ်ပေါင်းစပ်သွားရာမှတဆင့် system အတွင်းမှ surface မျက်နှာပြင်တွေကိုလည်း၊ abrasion or surface fatigue အနေနဲ့ ပွန်းပဲ့ပျက်စီးစေတတ် ပါတယ်။ လောင်စာဆီ fuel oil နဲ့ ချောဆီ lubricating oil အပါအဝင်၊ အခြားသော အမျိုးအစားမတူညီတဲ့ hydraulic fluids တွေရောနှောပါဝင်နေတဲ့အခါ၊ fluid ရဲ့ flash point ကျဆင်းသွားရသလို၊ vapour pressure လည်းမြင့်တက်ကာ၊ film strength ကျဆင်းမှုမှ တဆင့် viscosity ပါ လိုက်ပါကျဆင်း သွားတတ်ပါတယ်။
Reference : Givens W. and Michael P., Fuels and Lubricants Handbook, G. Totten ed., ASTM International, 2003, p. 373 ISBN 0-8031-2096-6, Placek, D., Synthetics, Mineral Oils and Bio-based Lubricants, L. Rudnick ed., CRC Press, 2006, p. 519 ISBN 1-57444-723-8, Bosch Automotive Handbook, 4th Edition, Robert Bosch GmbH, 1996, pp. 241 - 243. ISBN 0-8376-0333-1, Kornblatt, J. A. (1998). "Materials with Negative Compressibilities". Science 281 (5374):, Engineering Tribology (2nd Edition). Gwidon W. Stachowiak and Andrew W. Batchelor. Butterworth-Heinemann, Boston, 2001 (740pp), Mannesmann Rexroth. “Mineral Oil-based Pressure Fluids for Vane Pumps, Radial Piston Pumps and Gear Pumps as Well as GM, GMRP, MCS, MCR, MR and MKM/MRM Motors.” (RE 07 075/07.98), p.2. 1998., "Determining Hydraulic Fluid Viscosity Requirements". Machinery Lubrication Magazine. January 2007.,Viscosity of Hydraulic Oil By Martin Cuthbert M. Eng (Hons), Webtec Products Ltd., How well do you know your hydraulic fluid ? By Rob Profilet, Sep. 4, 2007, Lubrizol Corp., http://www.substech.com/, http://en.wikipedia.org/, http://www.skydrol.com/, http://www.exxonmobil.com/, http://www.astonseals.com/
Posted by ကိုထွန်း at 01:09
Hydraulic control valves (၄)
Hydraulic control valves (၃)
ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ Sea Trial (၃)
ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ Sea Trial (၂)
ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ Sea Trial (၁)